Madax shirkadeed oo siinaya shaqaalihiisa mushahar gaadha $70,000 - BBC News Somali
Madax shirkadeed oo siinaya shaqaalihiisa mushahar gaadha $70,000
29 Febraayo 2020
Lahaanshaha sawirka Gravity
Sanadkii 2015, badroonigan oo madax ka ah shirkad ku taalla Seattle, dalka Mareykanka ayaa qof walboo shaqaalihiisa 120-ka ka mid ah u qoray mushaar gaaraya $70,000 - wuxuuna isaga iska jaray $1m oo gunno uu u heli jiray. Shan sano kaddib wxuu aaminsan yahay inuu ku guuleystay.
Dan Price wuxuu buuraha Cascade waqti kula qaadanayay saaxiibtiis Valerie, markii uu fekerkan ku soo dhacay.
Waxay u sheegtay in nolosheeda ay ciriiri ku jirto, isla markaana milkiilaha guriga ay deggan tahay uu ku qaaliyeeyay kirada bishiina ka dhigay $200 oo ay la daalaa dhacayso bixinteeda.
Arrintaas ayaa ka xanaajisay Price. Valerie, oo ay mar xiriir lahaayeen, ayaa 11 sano ka tirsaneyd milatariga Mareykanka, iyadoo labo mar aadday Ciraaq, markaasna waxay toddobaadkiiba 50 saacadood ka shaqeyneysay labo shaqo.
"Waa qof lagu yaqaanno howlkar iyo sharaf," ayuu yiri.
Inkastoo ay sanadkii qaadaneysay lacag dhan $40,000, haddana guryaha Seattle ma ahan kuwo la goyn karo. Wuxuu ka carooday sida ay dunidu u noqotay meel caddaalad darradu ay ku badaneyso. Wuxuuna durba xaqiiqsaday inuu isago qeyb ka yahay dhibaatada.
Malaayin lacag ah oo lagu qoray eray khalad ah
Bilyan-dheerka ugu da'da yar caalamka oo digniin u jeediyay Trump
Markii uu jiray 31, Price wuxuu ahaa milyaneer. Shirkaddiisa, Gravity Payments, oo uu xilligii uu yaraa aasaasay, waxay lahayd ilaa 2,000 oo macmiil waxaana qiimaheeda lagu qiyaasay malaayiin doollar. Inkastoo uu sanadkii qaadanayay $1.1m, Valerie ayaa u sheegtay in laga yaabo in inta badan shaqaalihiisa ay dhibaato ku jiraan - wuxuuna go`aansaday inuu taas beddelo.
Dan Price o miyi kusoo babaaray, waa qof furfuran oo dadka u qira ammaantooda, isla markaana waa qof edeb leh, balse wuxuu aad uga murgay sinnaan la`aanta ka jirta Mareykanka.
"Dadku wa macluulayaan amaba waa laga faa`iideystay, si qof kale uu guri weyn uga yeesho magaalada New York uuna kuraas dahab ah ku fadhiisto.
"Waxaan bulsho ahaan dhiirri gelinnaa dhuuninimada. Liiska Forbes ayaana ah tusaalaha ugu xun - 'Bill Gates waxaa ninka dunida ugu taajirsan kala wareegay Jeff Bezos.' Maxaa naga galay!?"
Kahor sanadkii 1995 kala bar bulshada ugu saboolsan Mareykanka waxay saami fiican ku lahaayeen hantida dalka, sida uu sheegay. Balse sanadkaas xaaladdu way is beddeshay oo farqi weyn ayaa u dhaxeeya dadka saboolka iyo kuwa qaniga ah.
Sanadkii 1965, madaxda shirkadaha ee Mareykanka 20 jeer ayay ka mushaar badnaayeen shaqaalaha, balse sanadkii 2015 waxay gaartay 300 oo jeer inay ka mushaar bataan.
Isagoo qaadanaya hawada buuraha ayuu Price la yimid fakrad. Wuxuu aqriyay daraasad uu sameeyay dhaqaala-yahanka ku guuleystay abaalmarinta Nobel ee Daniel Kahneman iyo Angus Deaton, taasoo ay ku eegayaan lacagta uu u baahan yahay qofka Ameeerikaanka ah si uu farxad u dareemo. Wuxuu markiiba u ballan qaaday Valerie inuu kordhin doono mushaarka.
Markii uu fekeray wuxuu la yimid mushaar dhan $70,000. Wuxuu ogaa in keliya uusan dhimi doonin mushaarkiisa, balse ay sidoo kale saameyn ku yeelan doonto hantidiisa iyo keydkiisa. Wuxuu isugu yeeray shaqaalihiisa oo uu warkii ugu bishaareeyay.
Wuxuu filayay inuu dabaaldeg dhici doono, balse markii hore ee uu warkii ku dhawaaqay waxay dadku u muuqdeen kuwo niyad jabsan, sida uu sheegay Price. Mar kale ayuu warka ku celiyay.
Shaqaalihiisa marka saddex meel loo qeybiyo meel ayaa heshay saddex jibbaar mushaarkii ay qaadan jireen.
Wixii intaas ka dambeeyay dhaqaalaha shirkadda ayaa gaaray $10.2bn, halka sanad kahor uu ahaa $3.8bn.
Balse waxaa jira wax kale oo uu Price ku faanayo.
"Kahor inta aan la bilaabin mushaarka $70,000, waxaa shaqaalaha dhan sanadkii u dhalanayay labo carruur ah," he says.
"Kaddib markaas - keliya afar sano iyo bar kaddib - waxaa dhashay in ka badan 40 carruur ah."
Image caption Dan Price iyo hooyadiis
In ka badan 10% shaqaalaha shirkadda ayaa awooday inay guryo ka iibsadaan magaalooyinka ugu qaalisan Mareykanka. Markii hore in ka yar 1% ayaa awooday.
Lacagta ay shaqaaluhu caymis ahaan u dhiganayaan ayaa korortay, iyadoo 70% shaqaalaha ay sheegeen inay deymaha iska bixiyeen.
Shan sano kaddib, Price ayaa weli qaata mushaar ka yar kiisa hore. Wuxuu sheegay inuu haatan ka fiican yahay markii uu qaadan jiray malaayiin doollar, inkastoo aysan fududeyn.
"Maalin walba caqabado ayaa jira," ayuu yiri.
"Waxaan isku da` nahay Mark Zuckerberg waxaana isoo mara maalmo madow oo aan ku fekerayo, 'Inaan taajir u noqdo sida Mark Zuckerberg waxaana doonayaa inaan la tartamo oo liiska Forbes la igu soo daro. Waxaana rabaa inaan ku soo baxo bogga hore ee Time magazine, anigoo lacag badan sameynaya.' Dhammaan waxyaabahaas ayaa i riixaya."
"Ma aha wax fudud in isbeddel la sameeyo. Balse nolosheyda hadda aad ayay u fiicna tahay."